Degmada Baareey Iyo Xuskii Sanadguurada XDSHSI - Cakaara News
Degmada Baareey Iyo Xuskii Sanadguurada XDSHSI
Baareey( cakaaranews ) Talaado 8,da March 2016, Munaasabad lagu maamuusayay xuska sanadguurada 18aad ee XDSHSI ayaa kadhacday Damada Baareey ee Gobolka Afdheer waxaana kasoo qaybgalay dhamaan bulshada qaybaheeda kaladuwan sida hooyooyinka odayaasha dhalinyarada, Ardayda Dugsiyada iyo waliba maamulka degmadaas.
xuska munaasabadan oo laxuso sanadwalba 28 magabiit ayaa waxay kusoo hagaagtay xili ay shacabka dagmada baareey kujireen dabaaldaga degmooyinka gobolada iyo maamul-magaalooyinka cusub ee kusookordhay DDSI gaar ahaan 2da degmo ee u sookoradhay ka dagmo ahaan.
Hadaba munaasabadan ayaa Waxaa kahadlay kusimaha Gudoomiyaha Degmada ahna Hogaanka Nabadgalyada iyo Maamulka Cadaalada ee Degmada Baareey Calinuur Muuse Cali iyo kusimaha Madaxa Arimaha X.D.SH.S.I ee Degmada baareey Xiis Cabdi Axmed, oo si balaadhan uga hadlay taariikhdii xisbiga iyo waxqabadkiisa islamarkaana isbarbardhigay xaaldihii dhibaatada badnaa ee uu deegaanku soomaray, iyo xaalada uu manta kusuganyahay. Sidookale waxay masuuliyiintu tilmaameen in guulaha Horumarineed, Nabadgalyo iyo Maamulka-suuban ee uu XDSHSI keenay ay tahay mid aan la inkiri Karin ilaahayna ay ugu mahadcelinayaan.
Sidookale waxaa dhankooda kahadlay odayaal-dhaqameedka hooyooyinka iyo dhalinyarada oo sheegay in 28 magaabiit ay tahay maalin aan la ilaawi Karin islamarkaana kuwayn dhamaan bulshada deegeenka maadaama oo X.D.SH.S.I uu yahay midka keenay nabada iyo horumarka kahanaqaaday deegaanka.